Izintandokazi zizoninga ngezikwenzile ngo-Agasti | IOL Isolezwe
Izintandokazi zizoninga ngezikwenzile ngo-Agasti
Isolezwe / 23 August 2012, 2:21pm /
UNKK Thokozani MaMkhize-Ndlovu uzobe ephethe uhlelo lomcimbi wentandokazi ngempelasonto
UTENDER Mavundla odume kuma-Idols uzobe enandisa ngomculo emcimbini weNtandokazi Womens Club
KUZOBANIKA ithuba lokubuyekeza ngempumelelo yabo bese bebheka asebekwenzile kusukela kuqale inyanga ukuhlangana kwabo abesifazane emcimbini weNtandokazi Women’s Club.
UNkk Thokozani MaMkhize-Ndlovu, owayengumsakazi woKhozi FM, ozobe ephethe uhlelo kulo mcimbi ehhotela eKapenta Bay, ePort Shepstone, ngoMgqibelo, uthi leli yithuba elihle lokuthi abesifazane babuyekeze konke abakwenzile kulo nyaka, ikakhulukazi njengoba kusongwa inyanga yabo.
“Yisikhathi esihle sokuhlangana kubantu besifazane njengoba siphothula inyanga yethu. Kuzosinika ithuba lokuthi sibheke esikwenzile kusukela kuqala unyaka sibheke ukuthi sikwazile yini ukufinyelela emaphusheni ebesinawo futhi kuzosinika ithuba lokuthi sibheke ukuthi yini esingaphokophelela kuyo,” kusho uNkk MaMkhize-Ndlovu.
Abahleli balo mcimbi sebeshilo ukuthi konke sekumi ngomumo, sebebheke usuku uqobo njengoba sekudayise wonke amathikithi.
UNkk MaMkhize-Ndlovu uthe bazobhema bakholwe abazobe behambele lo mcimbi. Uhlelo lwakhona luhlanganisa izintokazi esezizenzele igama emculweni njengoba bezothokoziswa wumculo kaTender Mavundla owaduma kuma-Idols.
Wethembisile ukuthi uzodedela izingoma zakhe ezihlabahlosile kulo mcimbi obhekwe ngabomvu ngabesifazane bakulo lonke abazowuhambela.
UNkk Ntokozo Mbambo uzonikeza abesifazane amazwi akhayo nazobaqinisa njengoba ezokhuluma negizigameko ezithinte impilo yakhe zaze zamenza lo muntu anguye.
Ngeke kugcine lapho kepha abanye osaziwayo abafana noVuyi Gama we-Inecto bazobe bekhona ukucebisa abesifazane ngezindlela ezehlukene zokwenza ngcono impilo yabo.
Owesifazane akakwazi ukuphilela ubuhle nokuzicwala kuphela, yingakho Ithala lizoqikelela ukubanikeza iziyalo ngokusebenzisa imali ngendlela.
Kulo mcimbi, okungowesithathu kulo nyaka, leli phephandaba ligubha ngawo iminyaka ewu-10, ngakho owesifazane oyedwa uzohamba ebusisekile futhi engazisoli ngokuza kulo mcimbi ngoba uzohamba nesipho sosofa bakwa-Geen & Richards besikhumba ababiza u-R17 000.
Kwabawusekile lo mcimbi kubalwa i-Inecto, Geen & Richards, Spekko, uMnyango wezoBulungiswa, Ithala Bank noHallmark.